आउँदो बुधबारदेखि ई-पासपोर्ट परीक्षण, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी ! - ramechhapkhabar.com
आउँदो बुधबारदेखि ई-पासपोर्ट परीक्षण, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी !
काठमाडौं  । मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानीको परीक्षण वितरण सुरु गरिने भएको छ । आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउन लागिएकाले त्यसैको तयारी स्वरूप परीक्षण वितरण सुरु गर्न थालिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग एवं जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर वितरण सुरु गर्न विभागले आग्रहसमेत गरेको छ  । गोरखापत्रबाट ।